Igbo: ihe ọ bụ, àgwà, ụdị na mkpa | Green Renewables
Dị nnọọ ka e nwere usoro nke igbutu ọhịa nke na-efunahụ oke ọhịa, anyị nwekwara igbo igbo. Ọ bụ usoro ịkụ osisi ka e wee guzobe ihe ubi a na-ere ahịa ma ọ bụ belata mmebi gburugburu ebe obibi nke mebiri n'oké ọhịa. Dị ka ọ na-adịkarị, ịkụ osisi a na-aga site na usoro nhazigharị na mweghachi nke mpaghara okike.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịkụ osisi, àgwà ya na mkpa ya.
1 Gịnị bụ igbu osisi
2 Ihe ị ga -atụle
3 Isi usoro ịkpa oke ọhịa
4 Ụdị ịkpa oke ọhịa
4.1 Ugbo ọhịa azụmahịa
4.2 Agroforestry na agrosilvopastoral sistemu
4.3 Ohia a kụrụ maka ebumnuche gburugburu ebe obibi na ntụrụndụ
Gịnị bụ igbu osisi
Ịkụkọ osisi pụtara ịkụ osisi n'ebe ndị na-enweghị osisi na mbụ ma ọ bụ ndị a kpochapụrụ. N'okwu nke ikpeazụ, a na-akpọ ọrụ ịkụ osisi nke ọma mkpọgharị osisi, ya bụ, nnọchi nke ọhịa ma ọ bụ ọhịa ndị furu efuỌ bụ nnukwu ọrụ na ọ dị mkpa ịghọta ọnọdụ ihu igwe na ala (ala) nke ebe a ga-akụ osisi. Ọ dịkwa mkpa ịghọta ihe ndị dị ndụ chọrọ maka ụdị a ga-eji na-akụ osisi.
N'ime ụdị ịkụ osisi, ebumnuche bụ isi nke ubi azụmahịa bụ akụ na ụba, nke na-esote oke ọhịa na mweghachi. Na mweghachi, isi nzube bụ agwakọta (mmepụta na ecology), mgbe na mweghachi, ọ bụ naanị gburugburu ebe obibi. Okwu igbo putara ihe ime oke ohia (ohia). N'ọnọdụ ọ bụla, dị mfe na ụdị kachasị mfe, ọ bụ omume ịmepụta ma ọ bụ dochie oke ọhịa na mpaghara enyere.
O nwere ike ịbụ mpaghara na-enwebeghị oke ọhịa, ma ọ bụ mpaghara na-enweghị oke ọhịa ruo nso nso a. Nke mbụ mmewere ga-atụle bụ isi ebumnobi nke igbo, nke nwere ike ịbụ azụmahịa, agwakọta ma ọ bụ gburugburu ebe obibi. N'ihi na n'ọnọdụ ọ bụla, usoro ịkụ osisi na nlekọta nke mpaghara ọhịa dị iche iche.
Ihe ị ga -atụle
Ihe kachasị mfe bụ nguzobe nke ugbo ọhịa a na-ere ahịa n'ihi na ha gụnyere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụdị. Ọ bụ ezie na ọnọdụ iji weghachi oke ọhịa bara uru ijikwa ụdị na mgbanwe ndị ọzọ. N'ime ụlọ ahịa, ebumnobi bụ isi bụ imepụta osisi na mmepụta ihe, ebe mweghachi na-eweghachi njirimara gburugburu ebe obibi na ọrụ gburugburu ebe obibi. Ya mere, ka ọ dị mgbagwoju anya nke isi ọhịa, ka mweghachi ahụ dị mgbagwoju anya.
N'ọnọdụ ọ bụla, ịkụ osisi na mpaghara ga-ebu ụzọ tụlee ihu igwe, ọnọdụ ala, na mmiri dị na mpaghara ahụ. Ihe ndị a ga-emetụtarịrị ihe ndu chọrọ nke umu a ga-etinye n'ime oke ohia.
N'aka nke ọzọ, ekwesịrị iburu n'uche na enwere ike ịchọ ka ụmụ mmadụ nye onyinye. Nke a na-agụnye dochie mmiri na ihe ndị ọzọ, imeziwanye nhazi ala site na ọrụ ugbo, fatịlaịza, na igbochi ụmụ ahụhụ na ọrịa.
Tụkwasị na nke ahụ, dabere n'ụdị ịkụ osisi, ụfọdụ ọrụ nlekọta na nlekọta n'ozuzu nke ubi. N'aka nke ọzọ, a ga-atụle ihe ndị ọzọ, dị ka njem ụgbọ njem, ịnweta na ọrụ ndị ọzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na mpaghara a ga-akwagharị nwere ọrụ na-arụpụta ihe.
Isi usoro ịkpa oke ọhịa
Usoro ịgba osisi dị iche iche ma na-adịgasị iche dabere n'ụdị osisi a kapịrị ọnụ yana ihe achọrọ maka ụdị a ga-akụ. Otú ọ dị, n'ozuzu n'ikwu okwu, ọ dị mkpa iji mụọ ihu igwe, ala na ọnọdụ mmiri mmiri nke mpaghara ahụ. Họrọ ụdị maka ịkụ osisi.
N'ikpeazụ, a na-eguzobe ụlọ akwụkwọ ọta akara ebe a na-agbasa ụdị ahọpụtara. Ụdị ọ bụla nwere ike ịchọ ọnọdụ ọrụ nka na gburugburu ebe obibi kpọmkwem ka ome ma guzobe onwe ya na ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ụlọ akwụkwọ ọta akara ga-ekwe nkwa ọnụọgụ ndị mmadụ chọrọ n'otu nkeji nke mpaghara ihe ọkụkụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ụdị ọ bụla bụ njupụta ihe ọkụkụ akọwapụtara.
Njupụta a na-adabere na njirimara nke ụdị na nzube nke ịkụ osisi. Dịka ọmụmaatụ, na mweghachi nke gburugburu ebe obibi, ọ dị mkpa ikwe ka osisi tolite n'okike ka o nwere ike. N'ụfọdụ ubi a na-ere ahịa, Ọ nwere ike ịmasị mmasị ịbawanye ogologo n'ihu ma belata dayameta nke ogwe ahụ. N'okwu a, a ga-akụ osisi ndị ahụ nso.
Ọ bụrụ na ebumnobi bụ iweghachi oke ọhịa na-amaghị nwoke (mweghachi nke gburugburu ebe obibi), tụlee usoro njikwa iketa. Ọ na-agbalị iṅomi usoro ebumpụta ụwa nke iweghachi ọhịa n'usoro ihe ọkụkụ ya. N'ụzọ dị otu a, buru ụzọ guzobe ụdị ndị ọsụ ụzọ nwere ike iguzogide ụzarị anyanwụ ka ukwuu wee tọọ ntọala maka ụdị ndị ọzọ na-achọsi ike. Mgbe ahụ, guzobe ụdị ndị a n'usoro okike, na ihe ndị ọzọ, ruo mgbe a ruru nha nha mbụ.
Ụdị ịkpa oke ọhịa
Ụdị ịkụ osisi dị iche iche n'ezie, n'ihi na ụdị ọ bụla ma ọ bụ ngwakọta nke ụdị nwere ihe ọ chọrọ. Otú ọ dị, n'ozuzu, e nwere ụdị ise nwere ike ịtụle.
Ugbo ọhịa azụmahịa
Ọ bụ ahịhịa ọhịa mara mma nke na-amịpụta osisi na ihe ndị sitere na otu osisi ma ọ bụ karịa. Ya mere, n'agbanyeghị na ọhịa ndị a kụrụ gụnyere ihe karịrị otu ụdị, mpaghara ọhịa ọ bụla ma ọ bụ ala ọhịa bụ naanị otu ụdị (naanị otu ụdị).
Otu ihe atụ nke ịkụ osisi dị otú ahụ bụ ọhịa Uverito dị na Mesa de Guanipa nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Venezuela. Na mbụ, ọ bụ akwa ọhịa arụrụ arụ kacha ukwuu n'ụwa, na mpaghara ihe ubi nke hectare 600.000 nke pine pine Caribbean (Pinus caribaea).
Ala nke ọ na-ewu bụ savanna na-adịghị na-enweghị oke ọhịa na mbụ. N'aka nke ọzọ, a na-ebute ụdị ndị a na-eji eme ihe (ọ bụghị ihe e ji mara ebe ahụ), ya mere ọ bụ ihe ọkụkụ.
Agroforestry na agrosilvopastoral sistemu
Ụdị ọzọ nke ịkụ osisi nke a na-ejikwa maka ebumnuche akụ na ụba dị mkpa bụ agroforestry ma ọ bụ agroforestry na usoro ịzụ anụmanụ. Na nke mbụ, a na-ejikọta oke ọhịa na mkpo ma ọ bụ ọka ọka n'agbanyeghị ma ọ dị ọhịa mbụ.
N'ọrụ ugbo, oke ohia na anụ ụlọ, ịkụ osisi, ihe ọkụkụ kwa afọ ma ọ bụ ala ịta ahịhịa, na ịzụ anụ ụlọ na-akwado ibe ha.
Ohia a kụrụ maka ebumnuche gburugburu ebe obibi na ntụrụndụ
N'ọnọdụ ụfọdụ, nguzobe nke ubi abụghị maka mmepụta ọhịa, kama maka gburugburu ebe obibi. Ihe atụ nke ebumnuche ntụrụndụ bụ Central Park na New York, nke Ọ dị ka oke ọhịa dị n'akụkụ ụfọdụ, mana e mere ya na ebumnuche.
Ihe atụ ọzọ, na nke a, maka ebumnuche nchekwa gburugburu ebe obibi, bụ Great Green Wall nke China. Nke a bụ ọrụ ịgba osisi kachasị ukwuu n'ụwa, na ebumnuche iru ihe dị ka square kilomita 2.250.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere igbo na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ịkụ osisi